पहिरो पछि मुग्लिन-नारायणगढ सडकको बेहाल दृश्य [स्थलगत भिडियो], Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पहिरो पछि मुग्लिन-नारायणगढ सडकको बेहाल दृश्य [स्थलगत भिडियो]
मुग्लिन। राजधानी जोड्ने मुलुकको मुख्य राजमार्ग मुग्लिन-नारायणगढखण्डमा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा तीज मनाउन हिँडेका चेलीबेटी र यात्रुको बिचल्ली भयो ।
भीषण पहिरो गएपछि सडकको अवस्था, असंख्य सवारीको जाम र त्यहाँ फसेका यात्रुको अवस्था झल्काउने यो स्थलगत भिडियो रिपोर्ट हेर्नुहोस्ः
दैनिक सयौँ सवारी साधन र हजारौं यात्रु कुँद्ने यो सडक यात्रुका लागि सास्ती बनेको छ ।
राजमार्गले मुलुकको समग्र अवस्थालाई चित्रण गर्छ। त्यसमा पनि राजधानी जोड्ने राजमार्ग कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुपर्ने विषय होइन। तर हाम्रो हकमा भने राजधानी जोड्ने र मुलुककै प्रमुख राजमार्गको अवस्था भने दयनीय छ। मुलुकमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीको प्राथमिकतामा सडक सञ्जाल पर्छ। तर बोली र व्यवहारमा एकरूपता नहुँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ। अहिले यस्तै भएको छ, कलंकी–नागढुंगा–नौबिसेसडक खण्ड पनि।
अझ बर्खाको समयमा सडक माथिबाट पहिरो खस्ने र सडक नै भासिने खतरा रहन्छ। यो राजमार्ग मुलुकको लाइफलाइन पनि हो। राजधानी काठमाडौंमा खाद्यान्न ढुवानी यही राजमार्गबाट हुने गर्छ। पछिल्लो समय राजधानीबाट यात्रु बाहिरिने अन्य नाकापनि सञ्चालनमा आएका छन्। तर काठमाडौंमा अत्यावश्यक सामान लगायत खाद्यान्न ढुवानी अहिले पनि यही राजमार्गबाट हुने गरेको छ।
यतिबेला हाम्रो मुलुकमा रेल र पानी जहाजको बहन हुन तीव्र रुपमा हुन थालेको छ। राजधानीमा दैनिकजसो रेलसँग सम्बन्धित बहस र चर्चा हुन्छन्। जुन विषय आजकै मितिमा बनाउन थाल्ने हो भने पनि वर्षौंसम्म लाग्न सक्छ। तर दैनिक प्रयोगमा आउने सडक मार्गको अवस्थाका विषयमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएको देखिँदैन। जसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारणले भोग्नु परेको छ। कलंकीदेखिनागढुंगाकोसडकको अवस्थाका विषयमा धेरै बहस चर्चा हुने गरेका छन्। यो विषयमा राज्य, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकारवाला पक्षलाई जानकारी नभएको पनि होइन। तर पनि उक्त सडक खण्डको अवस्था आजपनि त्यस्तै छ। जसोतसो गरेर थानकोटसम्म आइपुगेपछि अनि सुरु हुन्छ जामको श्रृंखला।
ठूला ठूला ट्रकले सामान ढुवानी गर्दा नौविसेतर्फबाटकाठमाडौंजाने सडक रेलको लिक जस्तो भएको छ। जसका कारण साना सवारी साधानले सास्ती ब्यहोर्नु पर्छ। सडकमा परेका ठूला ठूला खाल्डातर्फसडक विभागको ध्यान गएको देखिँदैन। चारलेनको सडक भएपनि दुई लेनमा सवारी सधान चल्नसमेत मुस्किल हुने अवस्था छ। यो सडकखण्ड हुँदै दैनिक सयौँ सवारी सधान र हजारौं यात्रु दैनिक यात्रा गर्छन्। अवपादबाहेक कमैमात्रामासजिलैसँग गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ।
मंगलबारतीजको अघिल्लो दिन मुग्लिन–नारायणघाटसडक खण्ड अन्तर्गत चार किलो र ६ किलो भन्ने ठाउँमा गएको पहिरोका कारण हजारौं यात्रु अलपत्र परे। त्यसमा पनि तीजको अघिल्लो दिन दरखानमाइत हिँडेका चेलिबेटी र बालकालिकाकोबिचल्ली नै भयो। चारकिलो भन्ने ठाउँमा माथिबाट पहिरो गएपछि लगातार १८ घण्टासम्म सडक खुलाउन प्रयास गर्दा बुधबार विहान मात्र एकतर्फी सडक सुचारु भएको छ। साथमा खाने पानी र खाने खानाको अभावमा बालबालिकाको बिजोग नै भयो। प्रहरीले आफूहरु बाटो खुलाउन अहोरात्र खटिरहेको र सडक चाँडै संचालमा आउने बताएपछि यात्रुहरु हर्षित देखिन्थे। दुई, चार आठ हुँदै १८ घण्टापछि मात्र एकतर्फी सडक सञ्चालनमा आएको छ।